Isevisi Yokuphrinta ye-3D / Ukuphrinta Okusheshayo Okuphrintiwe kwe-3D / Ama-oda e-3D Printa - I-Createproto Tech Co., Ltd.
Ukuphrinta KWENKONZO / 3D
Umsebenzi wokuphrinta we-3D wokuphrinta okusheshayo, noma ngabe ukuphrinta okunembile kwe-SLA 3D noma ukuphrinta okuqinile kwe-SLS 3D, ungawubona kahle umklamo wakho ngaphandle kwemingcele.
Izinzuzo Zokuphrinta Kwe-3D
Finyeza Izikhathi Zokulethwa - Izingxenye zingathunyelwa ngaphakathi kwezinsuku ezimbalwa, kusheshiswe ukuphindaphindwa kokuklanywa nesikhathi sokumaketha.
Yakha iJiyomethri Eyinkimbinkimbi - Ivumela ukwenziwa kwezingxenye ezihlukile ezinamajometri ayinkimbinkimbi nemininingwane eqondile ngaphandle kwezindleko ezandayo.
Nciphisa Izindleko Zokukhiqiza - Shayela ukunciphisa izindleko zokukhiqiza ngokususa isidingo samathuluzi nokunciphisa abasebenzi.
Yini i-3D Printing Prototype?
Ukuphrinta kwe-3D yigama elibanzi elisetshenziselwa ukuchaza ukukhiqizwa okunezelwe, okubandakanya uchungechunge lobuchwepheshe bokuphrinta okusheshayo obuhlanganisa izingqimba eziningi zezinto zokwakha izingxenye.
Ukuphrinta okusheshayo kwe-3D kuyindlela esheshayo, elula futhi engabizi kakhulu yokuguqula imibono emihle ibe yimikhiqizo ephumelelayo. Lezi zibonelo zokuphrinta ze-3D azisizi nje kuphela ukuqinisekisa ukwakheka kepha futhi zithola izingqinamba ekuqaleni kwenqubo yokuthuthuka kanye nempendulo ngqo kulungiswa komklamo, ukuvimbela ushintsho olubizayo uma umkhiqizo usukhiqizwe ngokugcwele.
Kungani Khetha i-Createproto Ye-3D Printing Service?
I-Createproto ingungoti emkhakheni wokukhiqiza okusheshayo kwe-prototyping eChina, inikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene ze-3D zokuphrinta, kufaka phakathi ukuphrinta kwe-SLA 3D (Stereolithography), ukuphrinta kwe-SLS 3D (Selective Laser Sintering).
Kwa-Createproto Sineqembu eligcwele lonjiniyela abazinikele nabaphathi bephrojekthi abazosebenzisana nawe ukuqinisekisa imiklamo yakho ye-CAD, imisebenzi yomkhiqizo, ukubekezelelana okulinganayo, njll. Njengomkhiqizi womsebenzi wobungcweti, siziqonda ngokujulile izidingo nezibonelo zokukhiqiza zanoma yiliphi ibhizinisi. Silwela ukuhlangabezana nazo zonke izikhathi ezichaziwe ukuletha imikhiqizo ngesiqinisekiso sekhwalithi kumakhasimende ethu emhlabeni wonke ngamanani akhokhelekayo.
Kuyini Ukuphrinta kwe-SLA 3D?
Ukuphrinta kwe-SLA 3D (i-Stereolithography) isebenzisa i-laser ye-ultraviolet edonsela ebusweni be-liquid thermoset resin ukudala izinkulungwane zezendlalelo ezincane kuze kube yilapho kwenziwa izingxenye zokugcina. Ukukhethwa okubanzi kwezinto, izinqumo zezici eziphakeme kakhulu, nokuqedwa kobuso bekhwalithi kungenzeka nge-SLA 3D Printing.
Isebenza Kanjani Ukuphrinta Kwe-SLA 3D?
Ukucutshungulwa kwedatha, i-3D Model ingeniswa kuhlelo lokusika lwesoftware yokuphathelene, nezinhlaka zokusekelwa zengezwa uma kudingeka.
Ifayela le-STL bese lithunyelwa ukuphrinta emshinini we-SLA, nethangi eligcwele i-resin enesithombe esimanzi.
Ipulatifomu yokwakha yehliselwa ethangini. Ugongolo lwe-UV laser lugxile esikrinini selensi yengxenye yesiphambano engaphezulu kuketshezi.
I-resin esendaweni yokuskena iqina ngokushesha ukwakha ungqimba olulodwa lwento. Lapho ungqimba wokuqala usuqediwe ipulatifomu yehliswa ngo-0.05-0.15mm ngengqimba entsha yenhlaka emboza indawo yokwakha.
Isendlalelo esilandelayo siyalandelwa, siphulukise futhi sihlanganise i-resin kusendlalelo esingezansi. Bese uphinda le nqubo kuze kube yilapho ingxenye yakhiwe.
Kuyini Ukuphrinta kwe-SLS 3D?
Ukuphrinta kwe-SLS 3D (i-Stereo Laser Sintering) isebenzisa i-laser ephezulu yamandla efutha ungqimba lwezinhlayiya ezincane ngongqimba ukukhiqiza izingxenye eziyinkimbinkimbi neziqinile zejometri. Ukuphrinta kwe-SLS 3D kwakha izingxenye eziqinile ngezinto ezigcwele ze-Nylon, ezilungele ama-prototypes asebenzayo nezingxenye zokusetshenziswa zokugcina.
Isebenza Kanjani Ukuphrinta Kwe-SLS 3D?
Impuphu ihlakazeka ungqimba oluncane ngaphezulu kwepulatifomu ngaphakathi kwegumbi elibunjiwe.
Lapho ifudunyezwa ngaphansi nje kwezinga lokushisa elincibilikayo le-polymer, ugongolo lwe-laser luhlola i-powder ngokuya ngomugqa wesigaba esiphambanayo wesendlalelo bese luqothula amandla. Impuphu engahluziwe isekela umgodi kanye ne-cantilever yemodeli.
Lapho ukuqedwa kwesigaba esiphambanweni kuqediwe, ukushuba kwepulatifomu kuncipha ngongqimba owodwa, futhi i-roller yokubeka isakaza ungqimba lwe-powder eminyene kuwo ukuze kusetshenziswe isiphambano esisha.
Inqubo iyaphindwa kuze kube yilapho zonke izingqimba zenziwe sintered ukuthola imodeli eqinile.
Izinzuzo ze-SLA 3D Ukuphrinta
Ububanzi besendlalelo esingaphansi nokunemba okuphakeme.
Izakhiwo eziyinkimbinkimbi nemininingwane eqondile.
Izindawo ezibushelelezi nezinketho zangemva kokucubungula.
Izinketho ezahlukahlukene zempahla ebonakalayo.
Izicelo ze-SLA 3D Ukuphrinta
Ukuvikela izingxenye ezicacile.
Amaphethini we-Master for Silicone Molding.
Izinzuzo ze-SLS 3D Ukuphrinta
I-thermoplastics ebangeni lobunjiniyela (Inayiloni, i-GF Nylon).
Izakhiwo ezinhle kakhulu zemishini nokuhlanganiswa kwesendlalelo.
Azikho izakhiwo zokusekela, ezinika amandla ama-geometri ayinkimbinkimbi.
Ukumelana nokushisa, ukumelana namakhemikhali, ukumelana nokuhuzuka.
Izicelo ze-SLS 3D Ukuphrinta
Izingxenye Zokuhlola Zobunjiniyela.
Ukuphela-Ukusetshenziswa Production Izingxenye.
Amapayipi Axakile, Ukulingana Ngesankahlu, Amahinji Okuphila.
Qhathanisa Amakhono Alandelayo E-SLA Ne-SLS Ukukhetha Isevisi Yokuphrinta Ye-3D Efanele
Ukuphrinta kwe-SLS 3D kunothe ngezinto futhi kungenziwa ngepulasitiki, insimbi, i-ceramic, noma i-powders esebenza kahle. Imishini ye-Createproto ingakhiqiza izingxenye ezimhlophe ze-Nylon-12 PA650, PA 625-MF (Mineral Filled) noma i-PA615-GF (Glass Filled). Kodwa-ke, ukuphrinta kwe-SLA 3D kungaba yi-polymer enamanzi kuphela, futhi ukusebenza kwayo akufani nepulasitiki ye-thermoplastic.
Ubuso besibonelo sokuphrinta kwe-SLS 3D bukhululekile futhi bunzima, kuyilapho ukuphrinta kwe-SLA 3D kuhlinzeka ngencazelo ephezulu yokwenza ubuso bezingxenye bushelele futhi imininingwane icace.
Ngokuphrinta kwe-SLA 3D, Ubuncane Bobudonga Obunzima = 0.02 ”(0.5mm); Ukubekezelelana = ± 0.006 ”(0.15mm) kuye ku- ± 0.002” (0.05mm).
Ngokuphrinta kwe-SLS 3D, Ubuncane Bobudonga Obunzima = 0.04 ”(1.0mm); Ukubekezelelana = ± 0.008 ”(0.20mm) kuye ku- ± 0.004” (0.10mm).
Ukuphrinta kwe-SLA 3D kungakha ngokulungiswa okuphezulu ngobubanzi be-laser ugongolo obucayi nezingcezu ezingcwecwe zongqimba ukwenza ngcono imininingwane nokunemba.
Ukuqhutshwa Kwemishini Yokusebenza
Ukuphrinta kwe-SLS 3D kusebenzisa izinto zangempela ze-thermoplastic ukukhiqiza izingxenye ezinezakhiwo ezinhle zomshini. I-SLS icutshungulwa kalula, futhi ingagaywa kalula, imbe, futhi ngokuthepha ngenkathi kusetshenzwa ukuphrinta kwe-SLA 3D kufanele kuphathwe ngokunakekela uma kwenzeka le ngxenye yephukile.
Ukumelana nama-prototypes wokuphrinta we-SLS 3d emvelweni (izinga lokushisa, umswakama, nokugqwala kwamakhemikhali) kuyefana nalokhu okwenziwe nge-thermoplastic materials; Ama-prototypes wokuphrinta we-SLA 3d athinteka ekugugulekeni komswakama kanye namakhemikhali, futhi ezindaweni ezingaphezu kwama-38 they azoba ntofontofo okhubazekile.
Amandla we-Glue Bonding
Amandla okubopha wokuphrinta we-SLS 3D angcono kunalawo wokuphrinta we-SLA 3D, okukhona kuwo izimbotshana eziningi ebusweni bokubopha kwe-SLS okunikela ekungeneni kwe-viscose.
Ukuphrinta kwe-SLA 3D kufanelekile ukukhiqizwa kabusha kwephethini eyinhloko yesibonelo, ngoba inendawo ebushelelezi, ukuqina okuhle kobukhulu kanye nezici ezinhle.
Ukukhiqiza Ukukhiqiza Nokwengeza
Ukuphrinta kwe-3D kwaziwa nangokuthi ukukhiqiza okufakiwe, okwakha izingxenye ngokusebenzisa izingqimba zezinto zokwakha. Inezinzuzo eziningi kunezinqubo zokukhiqiza zendabuko kepha inezinkinga zayo. I-CNC machining inqubo ejwayelekile yokususa esetshenziselwa izingxenye zokukhiqiza, ezakha izingxenye ngokusika okungenalutho.
Izinto zokwakha nokutholakala
Inqubo yokuphrinta ye-3D ifaka izingxenye ezakhiwe ungqimba ngongqimba kusetshenziswa izinto ezinjenge-resin photopolymer resins (SLA), amaconsi e-photopolymer (PolyJet), izimpushana zepulasitiki noma zensimbi (i-SLS / DMLS), kanye nama-filaments epulasitiki (i-FDM). Ngakho-ke ikhiqiza imfucuza encane uma iqhathaniswa nenqubo ye-CNC. CNC machining ukusika lonke ucezu impahla, ngakho ukusetshenziswa izinga impahla kuqhathaniswa ongaphakeme. Inzuzo ukuthi cishe zonke izinto zingaba ngomshini we-CNC, kufaka phakathi amapulasitiki wobunjiniyela wokukhiqiza kanye nezinto ezahlukahlukene zensimbi. Lokhu kusho ukuthi i-CNC machining ingaba yindlela esebenza kahle kakhulu kuma-prototypes nasekupheleni kokusebenzisa izingxenye ezenziwe ngobuningi ezidinga ukusebenza okuphezulu nokusebenza okukhethekile.
Ukunemba, ikhwalithi ephezulu nobunzima beJiyomethri
Ukuphrinta kwe-3D kungadala izingxenye ezinama-geometri ayinkimbinkimbi kakhulu ngisho nokuma okuyize okungenakwenziwa ngemishini ye-CNC, njengobucwebe, ubuciko, njll. I-CNC machining inikeza ukunemba okuyisilinganiso (± 0.005mm) nokuqedwa okungcono kakhulu komhlaba (Ra 0.1μm). Imishini yokugaya esezingeni eliphakeme ye-5-axis CNC ingenza ukucubungula okuphezulu kwezingxenye eziyinkimbinkimbi ezizokusiza uhlangabezane nezinselelo zakho ezinzima kakhulu zokukhiqiza.
Izindleko, Ubuningi nesikhathi sokulethwa
Ukuphrinta kwe-3D kuvame ukukhiqiza izingxenye eziphansi zezingxenye ngaphandle kwamathuluzi, futhi ngaphandle kokungenelela komuntu, ukuze kwenzeke ngokushesha futhi izindleko eziphansi zenzeke. Izindleko zokukhiqiza zokuphrinta kwe-3D zinentengo ngokususelwa enanini lezinto zokwakha, okusho ukuthi izingxenye ezinkulu noma inani elingaphezulu libiza kakhulu. Inqubo ye-CNC machining iyinkimbinkimbi, idinga onjiniyela abaqeqeshwe ngokukhethekile uku-pre-program amapharamitha wokucubungula nendlela yokucubungula yezingxenye, bese kwenziwa imishini ngokuya ngezinhlelo. Ngakho-ke izindleko zokukhiqiza zicashunwa kucatshangelwa inani labasebenzi elengeziwe. Kodwa-ke, imishini ye-CNC ingaqhubeka ngokuqhubekayo ngaphandle kokuqondisa komuntu, iyenze ilungele imiqulu emikhulu.
Rapid Prototyping Futhi Ukukhiqiza, Cnc Prototyping, Ukuvikela okusheshayo, Ukuvikeleka Ngokushesha, Cnc Rapid Prototyping, Izinsizakalo Zokuphrinta Nezokushesha ze-3d,